မြန်မာပြည်အတွင်း | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ | MyJobs
မြန်မာပြည်အတွင်း ရှိ မှ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ
အလုပ်9ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
Warehouse Assistant (IRC)
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ
Location - Hpa-an, Kayin State.
Shelter Associate (UNHCR)
Duty Station : Sittwe, Rakhine State
WPE Senior Manager (IRC)
Location - Lashio, Northern Shan State
Field Project Assistant (MRCS)
Program Name : Community Based Programme for Malaria Prevention Duty Station : Pekon, Namsan
Field Supervisor (MRCS)
Department : Health Department Duty Station : Nansan, Pekon
Pelleting & Extruder Operator ( Bago )
Preferring the candidates who have good understanding of livestock feed machinery and processes.
Laboratory Technician (SARA)
Duty Station : Banmauk Township, Sagaing Region
Nutrition Field Officer (PIN)
Location: Mrauk-U Township, Rakhine State
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။